သည်နေ့မှာ တယောက်ချင်း ပြတင်းမှ မျှော်မိရာ မိုးမှာပျံသန်း၊ မမောတမ်း ငှက်လူငယ် အရွယ်လှလှ၊ တကောင်စ နှစ်ကောင်စ အိပ်တန်းက ထလာ၊ တီတာတာတေး ကျူးရင့်ကြွေးသော်၊ မျှော်ငေးမော့စိုက် ရင်၌ ကြည်နူး ယစ်မူးမိပါလေ၏။ နုယဉ်ကဗျာကို အကုန်စာပြန်မရိုက်အားသေးပါ။ တယောက်ချင်း၊ တကောင်စ၊ တခဏဝယ်၊ ကဗျာတေးတပုဒ် သတ်ပုံတွေကို မှန်အောင်ရေးတတ်သူ ရှားသွားပြီ။ တကောင်စ နှစ်ကောင်စသာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကနေ့ လမ်းတွေမှာ လူရှင်းနေတဲ့ပုံတွေ တွေ့ရပါသည်။ တမြန်နှစ်က ရေးထာတယ်။ ကနေ့ နေ့တဝက်မှာ အဆင်မချောတာတွေ တခုပြီးတခုလာတယ်။ အသက် ကျား မ အချက်အလက် မပြောပဲ မေးတာတွေ။ နားမလည်တဲ့ မြန်မာစာတွေ အင်္ဂလိပ်စာအတိုကောက်တွေ။ ဟိုမေး ဖြေလိုက်ရ။ သည်မေးပြန် ဖြေလိုက်ရ။ နောက်တယောက်က နည်းနည်းပြောပြီးမေး ဖြေရ။ အသစ်တွေတိုးပြောမေး ဖြေရ။ မေးတာတွေဖြေနေတာ ဆယ်နှစ်ကျော်လို့ သိတာက အဆင်မချောတာနောက်မှာ အပေါက်အလမ်း မတည့်တာလာတယ်။ လောကဓံဆိုတာ လေးစုံရှိတယ်။ လမ်းကောက်ပြီးတော့ လမ်းဖြောင့်တွေ့တတ်တယ်။ သူများတွေမေးတာကို ဖြေနေသူဟာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကို ရွေးလို့ရတာမဟုတ်။ ကျွန်တော် လမ်းမျိုးစုံမှာ လျှောက်ခဲ့ဖူးပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ခန့်က ပို့စ်တခုတွေ့တယ်။ အရင်သမတကြီးဟာ နောက်အစိုးရကို ဘာတခွန်းမှမပြောဘူးတဲ့။ အဲတာမြင့်မြတ်လို့တဲ့။ မြင့်မြတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တုံဏှိဘာဝေ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းအဓိပ္ပါယ်ကို သိပုံမရ။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ စကားသိပ်မပြောပဲ ကောင်းရာမွန်ရာလုပ်သူတွေ၊ စကားသိပ်မပြောပဲ ဆိုးသွမ်းရက်စက်တာတွေလုပ်သူတွေ၊ စကားရိုင်းစိုင်းပေမယ့် ကောင်းမယ်ထင်တာလုပ်သူ၊ စကားလည်းမယဉ်ကျေး လုပ်ရပ်လည်း ညံ့ဖျင်းသူမျိုးလည်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ကိုရေးတော့ ကွန်မင့်တခုက မြင့်မြတ်သူတို့ကျင့်ဝတ်များဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးဆရာ။ လေးစားပါသည်တဲ့။ အဲလိုတော့ မဟုတ်ပါဗျာ။ မြင့်မြတ်သူဆိုတာ အကျင့်သီလပါပြည့်စုံတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Bye Christel House DORS
၆ နှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ အဲဒီကျောင်းမှာ မြန်မာဘာသာပြန်ဆရာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၂ တန်းဒီပလိုမာပေးတဲ့ သက်ကြီးကျောင်း။ မြန်မာပြည်အပါအဝင် မိခင်စကား အင်္ဂလိပ်စာ မဟုတ်တဲ့ တိုင်းပြည်ပေါင်းစုံကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ယူအက်စ်အေကို လာရောက်နေထိုင်သူတွေကျောင်း။ ဆရာလုပ်ခဲ့သူပါ ပညာတွေ ရခဲ့တယ်။ မြို့ရွာ၊ တိုင်းပြည်၊ အလုပ်အကိုင်မျိုးစုံကနေ ခွဲခွါနှုတ်ဆက်ရခြင်းတွေ အရေအတွက် မနည်းတော့ပါ။ ထူနေပြီလော၊ ထုံနေပြီလော။ လူတိုင်းမှာ အဲလို အတွေ့အကြုံတွေ ရှိကြတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၂-၂၀၂၁ ၁-၂-၂၀၂၂
ခွေးတကောင် ကြောင်တမြီးမှမရှိ ခွေးဖြူတော မတိုးဝံ့ ခွေးကလေးအရောဝင် ပါးလျက်နာလျက် ခွေးကျိုးနဲ့ ယုန်လိုက် ခွေးကြီးမှ လက်ပေးသင် ခွေးဖြူ တောမတိုးဝံ့ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် ခွေးရူးကောင်းစား တမွန်းတည့် ခွေးရူး ဖက်ကိုက် ခွေးကောင်း နားရွက်ပြတ် ခွေးလှေးခုန်၍ ဖုန်မထ ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့် အိပ်ရေးပျက် ခွေးဟောင်၍ တောင်ပို့ မပြေး ၁။ ခွေး ဖြူတော မတိုးဝံ့ (ခွေးတွေဟာဖြူကောင်ရှိတဲ့တောမတိုးဝ့ံ)လို့လည်းယူကြပါသတဲ့။ ၂။ ခွေးမ ပိန်နဲ့ ယုန်လိုက် ဟင်းငတ်တာ လူသိ တခုတိုးပေးပါဆရာ။ ၃။ ခွေးပု ရန်လို ၄။ ခွေးအလုပ်ကိုမြင်းလုပ်ဝါးရင်းဒုတ်နဲ့အုပ်ခံရ ၅။ ခွေးပါးစပ်ကနတ်စကားထွက် ၆။ ခွေးအ ကြီး လှည်းနင်း ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Cancer incidence by decade ကင်ဆာ ကိန်းဂဏန်များ
ဆေးသုတေသနတွေကို ယူအက်စ်အေမှာသာ အများဆုံးလုပ်လို့ ယူအက်စ်အေက ကိန်ဂဏန်းတွေကိုသာ တင်ပြပါမယ်။ ၁၉၅၀ ကနေ ၁၉၉၀ အထိ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း 10.8% များလာတယ်။ • ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးရနှုန်း အဆုတ်ကင်ဆာကိုဖယ်ထားရင် 14% ကျဆင်းလာတယ်။ • ၁၉၉၁ ကနေ ၂၀၁၈ အထိ သေနှုန်း 31% ကျဆင်းလာတယ်။ • ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၁၉ အထိ ကင်ဆာသေနှုန်း 27% ကျဆင်းလာတယ်။ • လူဦးရေ တသိန်းမှာ 200.8 ကနေ 146.2 အထိ ကျလာတယ်။ Top5Deadliest Cancers သေဆုံးမှုအများဆုံး ကင်ဆာများ (၂၀၁၄ ခုနှစ်) 1. Lung Cancer. U.S. deaths in 2014: 159,260 အဆုတ်ကင်ဆာ 2. Colorectal Cancer. U.S. deaths in 2014: 50,310 အူမကြီးကင်ဆာ 3. Breast Cancer. U.S. deaths in 2014: 40,430 ရင်သားကင်ဆာ 4. Pancreatic Cancer. U.S. deaths in 2014: 39,590 သရက်ရွက်ကင်ဆာ 5. Prostate Cancer. U.S. deaths in 2014: 29,480 ယောက်ျားဆီးကျိတ်ကင်ဆာ Prostate cancer ယောက်ျားဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ၅ နှစ်အသက်ရှင်နှုန်း 99% ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ ကင်ဆာကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၁-၂၀၂၂
ရေသည်ယောက်ျားဆို။ ။ ဆံထုံးတော်ကြီး၊ တမာသီးနှင့်၊ ခါးစည်းဝတ်လဲ၊ ချုပ်စပြဲကို၊ တဲအပ် နှင့်တွယ်။ လူမြင်သမျှ၊ စိတ်ပျက်အောင် လှပါတဲ့၊ မရေသယ်။ ။ကုန်သွယ်ရေရောင်း၊ စီးပွားကြောင်းနှင့်၊ လူကောင်း ကိုယ့်မောင်၊ ရုံးလှဆောင်၊ ဝအောင်စား၍၊ ခါးဝတ်တဲ့ပြင်။ လက်ကပ်-ခြေကပ်၊ ပိုမိုမြတ်လို့၊ အဖက်တင်၊ အိမ်တွင်အများ၊ သံသေတ္တာနှင့်၊ လုံစွာထား၊ ငွေသားလေးရွေး ရှိပါတယ်။ ။ သည်ပစ္စည်းတွေ၊ လေးရွေးငွေကြောင့်၊ စိတ်သေလက်ချ၊ မအိပ်ရနိုင်ဘူး၊ ညမှုညလူ၊ သူခိုးများ ပူလွန်းလို့၊ ကိုယ်ထူ-ကိုယ်ထ၊ ကင်းဝတ်လှဲ့၍၊ စောင့်ခဲ့ရ ကာလ မနည်းကြာပါပြီ။ ။ ညစာနံနက်၊ စားရရက်မှာတော့၊ မြက်သီးရောရာ၊ မုရောဆိုတဲ့၊ ဆန်အိုတာကို၊ ရတနာချဉ်ပေါင်၊ ငါးပိအရှင်း၊ ဆီမဆင်းတဲ့၊ ဟင်းများနောင်နှင့်၊ အာခေါင်ကိုဆွတ်၊ မဝင်မချင်း၊ လည်ချောင်းကိုစင်းပြီးလျှင်၊ အတင်းသာ သွတ်ရတယ်။ ။ ခါးဝတ်လဲမှာ၊ မျက်မြင်ပါဘဲ။ ဥစ္စာပြည့်စုံ၊ ဓနဂုဏ်နှင့်၊ ကုံလုံဘိခြင်း၊ မသိမ်ဖျင်းပါဘူး၊ လူဆင်းရဲ မမှတ်ပါနဲ့ အမိငယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တနှစ် = ၃၆၅ လေးပိုင်းတပိုင်းရက်။ လေးပိုင်းတပိုင်း = တမတ်။ တနှစ် အတိအကျ = ၃၆၅့၂၄၂၂ ရက် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မင်္ဂလာပါဆရာ အခြားမလပ်လို့ရေးတာ မှန်ပါသလား။ မခြားမလပ်လို့ရေးတာ မှန်ပါသလား ခင်ဗျ။ ခြားစာလုံးက ကြိယာဖြစ်တယ်။ ပိုင်းကန့်သည်၊ တသီးတသန့်ဖြစ်စေသည်၊ ကွဲပြားသည်၊ တမျိုးတဖုံဖြစ်သည်။ မခြားလည်း ကြိယာ။ မခွဲခြားပါနှင့်။ မခြားပဲ (ကြိယာဝိသေသန) ရေးသည်။ မြန်မာစာလုံး အတော်များများမှာ အ ထည့်ရင် နာမ်ဖြစ်သွားတယ်။ အခြား။ အပိုင်းအခြား။ ရေကိုသားသော် အခြားမထင်သကဲ့သို့။ ခြာကလည်း ကြိယာ။ တဆက်တည်း မဟုတ်။ အကြားလပ်သည်။ သားသမီး ခြာသည်။ စကားစုတခုနှင့်တခု ခြာပြီး ရေးသားပါ။ ရေကိုသားသော် အခြားမထင်နဲ့ ရေကိုသားသော် အကြားမထင်လို့ မူကွဲရှိနေတယ်။ ရေကိုသားသော် အကြားမထင်လို့ မြဝတီဝဘ်ဆိုက်မှာ စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ဆောင်းပါးတပုဒ် တင်ထားတယ်။ အကြား = ကြားနေရာဖြစ်လို့ ဆိုလိုချက် တမျိုးဖြစ်စေတယ်။ ရေကိုသားသော် အခြားမထင်သကဲ့သို့က မှန်တယ်။ ရာမဇာတ်ထဲမှာ ရွှေသမင်လိုချင်တဲ့ သီတာမင်းသမီးက ရာမမင်းသားကို ရွှေသမင်း အဖမ်းခိုင်းခဲ့တယ်။ သမင်ဖမ်းထွက်နေစဉ်မှာ ရာမမှာ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေသယောင် ဥပါယ်တံမျဉ်နဲ့ အသံပြုတော့ သီတာက စိုးရိမ်ပြီး၊ လက္ခဏာကို ရာမနောက် လိုက်ခိုင်းတယ်။ လက္ခဏာက နောင်တော်ရာမရဲ့ အသံ မဟုတ်ကြောင်း ပြောပေမဲ့ သီတာက စိုးရိမ်ပြီး၊ ရာမနောက်ကိုသ
Valiera ဆေးက ဘာအတွက်ကောင်းတာပါလဲ ဆက်သောက်ရင်ဆိုးကျိုးရော ရှိနိုင်ပါသလားရှင့်။ ကျွန်မ အသက်က ၄၇ အပျိုကြီးပါ။ အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံးချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာတွေကို သက်သာစေအောင်ပေးတဲ့ စားဆေးဖြစ်တယ်။ အကြောင်းတခုခုကြောင့် အီစထိုဂျင်ဟော်မုန်းနည်းသွားသူတွေကိုလည်း ပေးတယ်။ Treatment of moderate to severe vasomotor symptoms associated with menopause. There is no comparable evidence that estrogens affect the neurologic or depressive symptoms commonly associated with menopause, so treatment is not indicated in these cases. Treatment of vulvar and vaginal atrophy. Treatment of cases of decreased estrogen secretion due to hypogonadism, oophorectomy or primary ovarian insufficiency. Treatment of androgen-dependent advanced prostate carcinoma (temporary use only) Prevention of osteoporosis. Dosage In the treatment of moderate to severe symptoms of vasomotor disorders, vulvar and vaginal atrophy in menopause should be initiated with the lowest therapeutic dose and selected regimens that can control thes
အသူရာ နှင့် အသူတရာ
အသူ = လူတယောက် မတ်တတ်ရပ်နေပြီး လက်ကို အထက်ဆန့်မြှောက်ထားစဉ် ခြေဖဝါးမှ အထက်ဆုံး လက်ထိပ်ဖျားအထိ အမြင့်အတိုင်းအတာ။ အသူတရာဆိုတာ အဲဒီအတိုင်းအတာ အဆတရာ။ အသူရာ = နတ်တွေလို ဘုံသီးခြားမရှိချေ၊ ၎င်းတို့နေသောအရပ်ကိုသာ အသူရကာယ်ဘုံဟု ခေါ်ကြသည်။ ပြိတ္တာမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ တောတောင်၊ သမုဒ္ဒရာ၊ မြစ်ကမ်း၊ သုဿန်များတွင် နေတတ်၍ အလွန်ဆာလောင် မွတ်သိပ်ကြသည်။ ကသစ်ပန်းသီချင်း (မြို့မငြိမ်း) နတ်စည်ငယ်လေ၊ ပုဇွန့်လက်ရိုး အာလမ္ဗရာ၊ ကျော်ဝန်းသံဝါ ဆော်ရွမ်းညံစာစာ၊ တိမ်ယံအာကာ နီလာပြင်ဆိုင်း သင်တိုင်းခြုံလွှာ၊ အုံ့မှိုင်းညိုပြာ၊ မိုးထက်ကဲဝဠာ ကိုးချက်နယ်မှာ၊ တိမ်ခိုးယှက် မိုးသက်လေးတွေဖြာ ဝေဆာ သခွပ်ဖြူပင်မင်း ငွေအဆင်း ပွင့်ချိန်မှာ အသူရာ ဒေါသထွက်လို့ မြင်းမိုရ်ထက်သို့ တက်လို့ စစ်ဖက်တဲ့ခါ အုံ့ခါလေတဖွဲဖွဲ ရွာလေတသည်းသည်း လွဲခဲ့ကြရရှာ နတ်တို့ နတ်ရွာဝတိံသာ အသူရိန်တွေဟာ ဘုံသာဝေယံနန်းမြင့် ကသစ်ပန်းပွင့် ရတုဖြာ သဘင်ပွဲပြုကာ အို သခွပ်ဖြူစွာ အပွင့်ကိုသာ မြင်တော့မှ ဝတိံတွင် မဟုတ်ပါလား ဟရို့ရဲ့ သေနင်ဗျူဟာ နတ်အသူရာ မင်းငယ်လေ စစ်ခင်းလုမယ်လာ ရှေးရှု ဝတိံသာ ဝေဆာ သခွပ်ဖြူပင်မင်း ငွေအဆင်း ပွင့်ချိန်မှာ အသူရာ ဒေါသထွက်လို့ မြင်းမိုရ်ထက်သို့ တ
ကျွန်တော်၊ ကျမခေတ် မှေးမှိန်လာတယ်။ သား-သမီးနဲ့ အစားထိုးတယ်။ ပြောပြပါ၊ ရှင်းပြပါအစား အလင်းပြပါတဲ့။ ဆရာဝန်ကို လျှပ်စစ်ရုံးက မှတ်နေကြသူတွေက။ ခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျနဲ့ ရှင်၊ ရှင့်လည်း မှေးမှိန်လာတယ်။ နော်နဲ့ အစားထိုးတယ်။ နော်ဆိုတာ စကားကို ထူးခြားစေအောင်ဆက်ပြောတဲ့ အသုံးဖြစ်တယ်။ တောင်းပန်တဲ့သဘော။ နော့ ဆိုရင်တော့ ချွဲပျစ်တာ။ နော်လို့ စကားအဆုံးမှာထည့်ပြောတာက အမျိုးသမီးသုံး။ ကလေးတွေကို ပြောတာမျိုး။ ယောက်ျားတွေကပါ ထည့်ပြော ထည့်ရေးနေကြတာ မသင့်လို့ ထင်တယ်။ • လာခဲ့နော် • သွားမယ်နော် • စားနော် အားမနာနဲ့ • နော်ဇာပန်းပင် • ဒွေးမယ်နော်ဇာတ် • နော်လီဇာ • အို နော်ဇာရွှေကုံး ဂမုန်းခိုင်ရေ (မောင်တို့ချယ်ရီမြေ) မဟာနန္ဒာကန်တော်ဘွဲ့ ချစ်၍ခေါ်ရာ၊ လိုက်ချင်ပါလည်း၊ နော်ဇာရွှေကုံး၊ တခိုင်ရုံးကို၊ လုံးလုံးမယ်ထွေး၊ မပိုင်သေးခဲ့၊ မဝေးဘူးဆို၊ မြို့မြောက်ဟိုတွင်၊ မြင်းမိုရ်တောင်လောက်၊ ကန်ပေါင်မောက်နှင့်၊ ယင်သောက်ရုံမျှ၊ မြူမကျသား၊ ချမ်းမြရေကြည်၊ ကြာငါးမည်လည်း၊ ထော်ပည်ဟင်းရမ်း၊ ပြိုးပြောက်ပြွမ်းလျက်၊ ဆွတ်လှမ်းမလွယ်၊ ကုံးသီသွယ်သို့၊ လွမ်းဖွယ်သာယာ၊ ကန်တော်မှာသည်။ ။ ရောက်ခါမြင်ရပေလိမ့်မည်။ ဘုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်းဆရာ၊
သား နဲ့ တား
၁။ မျဉ်းတားမဟုတ်ဘူးလား။ မျက်စိလည်ကုန်ပါပြီ။ (မျဉ်းသားသည်။) ၂။ ကိုယ်ဝန်သားဆေးသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ (တားဆေးလို့ရေးရတယ်။) ၃။ သမီး သားဆေးသောက်ထားတယ်ဆရာ။ (တားဆေးလို့ရေးရတယ်။) ၄။ မေးတာတခုတွေ့တယ်။ မျဉ်းမတားလားတဲ့။ မျဉ်းသားသည်လို့ ရေးပါတယ်။ စာရေးသားသည်လို့သဘော။ တားက တားဆီးတာ။ သား သားစဉ်မြေးဆက်၊ သားမြတ် (ရင်သား)၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်၊ သားသည်အမေ၊ သားသတ်သမား၊ သားသမီးလိုချင်၊ သားသားနားနား ဝတ်ဆင်ထား၊ သားဦးကိုယ်ဝန်၊ သားကောင်၊ သားရေဂျာကင်၊ အမျိုးသား၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ မျဉ်းသားသည်။ တား တားဆီးသည်၊ တားမြစ်သည်၊ ပဋိသန္ဓေတားဆေး၊ ဝါသနာကို မတားနဲ့တော့ရှင်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကချေသည် နှင့် ကခြေသည်
နိုင်ငံခြားရောက်နေပေမဲ့ မြန်မာအကကိုမြတ်နိုးတဲ့ အမတယောက်က ဒီသီချင်းလေးနဲ့ ကချင်ပါတယ်လို့ပြောထားတာ ခုမှသင်ပေးဖြစ် - https://www.facebook.com/watch?v=455774902920101 ပို့စ်တခုက တယောက်ရေးတာ သတ်ပုံမှန်တယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ကချေသည် နဲ့ ကခြေသည် မူကွဲသတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကခြေသည်ဆိုတာ ယရစ်ဖြင့် ရေးရတာလားခင်ဗျ။ ယပင့်နဲ့ ရေးတာပဲ တွေ့ဖူးလို့ပါ။ အဓိပ္ပါယ်နှင့် စာလုံးပေါင်း အမှန်ကို သိတယ်ဆိုလျှင် ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ အရင်ထုတ် သတ်ပုံစာအုပ်တခုမှာ ကခြေသည်နဲ့ နောက်တခုမှာ ကချေသည်လို့ ပေါင်းထားတာတွေ့ပါတယ်။ နောက်ထုတ် စာအုပ်တွေမှာ ကချေသည်လို့ ပေါင်းတာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ကခြေသည်လို့ပေါင်းပါတယ်။ တပင်တိုင်သတ်ပုံကိုပါ တင်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာဆရာ ဘုတလင်ချစ်လေးက ကခြေသည်နှင့် အခြားကဗျာများစာအုပ်နဲ့ အမျိုးသားစာပေဆုရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အထက်တန်းမှာ မြန်မာစာကို ဘုတလင်ချစ်လေးကသင်ပေးပါတယ်။ ဆရာ့ရေးဖွဲ့တဲ့ ကချေသည်နှင့် အခြားကဗျာများက အမျိုးသားစာပေဆုရတယ်။ ဆရာ့ကဗျာကို စန္ဒရားအောင်ခင်ကနေ သီချင်းဖွဲ့ပြီး၊ ဒေါ်မေစီက ဆိုပါတယ်။ ကချေသည်သီချင်းစာသားထဲမှာ - တခါတရံဝယ် မုန်းသူကိုလည်းချစ်ဟန်ဖွဲ့ရတယ်၊ တခါတရံဝယ်
တရားစာ ရေးမှာ မဟုတ်ပါ
တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အလွန်တရာ (တ) သတ်ပုံတွေ မှန်ပါသည်။ ဥပါဒါန်လို့သာ ရေးရပါမည်။ ဂူဂယ်မှာရှာကြည့်တော့ အဲဒီစာလုံးတွေကို စသတ်တွေနဲ့ မြင်မကောင်းကောင်း များတာတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းတရားနဲ့ တဏှာကိုပင် စသတ်သူတွေလည်းတွေ့ပါသည်။ YouTube တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး၏ (အလွန်တစ်ရာ)အစွမ်းထက်လှသည့် ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ ဂါထာတော်ကြီး တဲ့။ မြန်မာစာသာမက တရားတော်ပါ ပျက်ရော။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ခေတ်သစ်ရာဇဝင် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကျွန်တော်က အဲလို အချက်အလက်မှန်၊ သတ်ပုံမှန်တဲ့ စာအုပ်မျိုးတွေကို ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အာဏာကို မိမိတဦးတည်းလက်ဝယ်ထားသဖြင့် လုပ်ကြံခံရသော ဆီဇာ
သြဂတ်စတက်ဆီဇာ (ဘီစီ ၆၃ - အေဒီ ၁၄) အကြောင်း တင်ထားတာတွေ့တယ်။ (တ) သတ်ပုံကတော့ ခေါင်းစဉ်ကတည်းက လွဲတယ်။ မဆန်းပါ။ ဂျူးလယပ်ဆီဇာအကြောင်း မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၄၊ စာမျက်နှာ ၁၄၅ ကနေ ၁၄၈ မှာပါတယ်။ အာဏာကို မိမိတဦးတည်း လက်ဝယ်ထားသဖြင့် လုပ်ကြံခံရသော ဆီဇာ။ သတ်ပုံလည်းမှန်တယ်။ သတ်ပုံအမှန်အတိုင်း ရေးသားသူက အတော်နည်းသေးတယ်။ ၂၀၂၁ ကစပြီး အမှန်ကိုရေးလာသူတွေ တိုးများလာပါတယ်။ ကောင်းတယ်။ မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်အတိုင်း ရေးသားရဲတဲ့သတ္တိလိုတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဘယ်ဟာက အမှန်လဲ ဆရာ၊ သိပါရစေခင်ဗျာ။ ပို့ပေးတဲ့ ပုံထဲက အမှန်ခြစ်ထားတာက မှားပြီး၊ အမှားခြစ်ထားတာ နှစ်ခုကသာ မှန်တယ်။ ချွေးနှီးစာ သို့မဟုတ် ချွေးနဲစာက မှန်တယ်။ ချွေးနဲစာလို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ စက်တင်ဘာလထုတ် မြန်မာအဘိဓာန်မှာ ချွေးနှဲစာလို့ ရေးထားတာ မမှန်ပါ။ နှီး = အရင်းအနှီး၊ ရင်းနှီးသည်။ ချွေးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးရရှိသော၊ ချွေးနဲ့ ရင်းပြီးရရှိသော။ အရင်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်တွေထဲမှာ မနဲလေးနတ်။ မိနဲကလေးနတ်။ ထမနဲ။ ယာဂုထမနဲ။ မယ်နဲမိနတ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တနိုင်ငံလုံးနဲ့ ပဌမကို မှန်အောင်ရေးတတ်သူ ရှားတယ်။ အံဖွယ်ကိုးသွယ်ဂုဏ် ကုံလုံပြည့်ဝသည့် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီးသည် မူလဒါယကာ အနော်ရထာ၏လက်ထက်တွင် အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့ပဲ၊ ကျန်စစ်သားမင်းလက်ထက်တွင်မှ ဆက်လက်တည်ဆောက် ပြီးမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ ထိုမင်းများကား ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားကာ ယင်းတို့၏ခေတ်တွင် နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်သည် ယခုခေတ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်နီးပါး ကျယ်ဝန်း၍ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ပဌမဆုံး တနိုင်ငံလုံး ကြည်ညိုမြတ်နိုးကြပြီးလျှင် တိုင်းသူပြည်သားတို့သည် နိုင်ငံရေး သာသနာရေး စိတ်ဓာတ်များ တက်ကြွနေကြသည်။ (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ (၁၄)၊ စာမျက်နှာ (၁၅၃)။ ခုခေတ်မှာ ပဌမလို့ရေးရင် ဘိတ်ဆုံးလို့ထင်ကြတယ်။ ဘုရားတိုင်တည်ပြောလည်း မရ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ရည်းစားကရှိပါတယ်။ ငါတော့မဟုတ်ဘူးလို့ ရေးတင်ထားတာတခု ဖတ်ရတယ်။ အပျော်အပျက်ရေးတာ ဖြစ်ပါမယ်။ (က) ဝိဘတ်ကို ထောက်ပြချင်တယ်။ က = ကတ္တားဝိဘတ် + ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ် + အချိန်ပြဝိဘတ် + နေရာပြဝိဘတ် - မောင်လှက ရိုက်သည်။ - ရန်ကုန်က လာသည်။ - မနက်က မုံ့ဟင်းခါး စားခဲ့သည်။ - မြက်ခင်းက စိုနေသည်။ သူ့မှာ ရည်းစားရှိတယ်။ ငါတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရည်းစားရှိပါတယ်လို့ ရေးရင် ရှင်းတယ်။ - ရည်းစားက ကော်ဖီတိုက်တယ်။ - ရည်းစားက ရန်ကုန်ကလာတာ။ - ရည်းစားက တယောက်တည်းပါ။ - ရည်းစားတော့ ရှိတယ်။ - ရည်းစားလည်း ရှိတယ်။ အခုခေတ် (ရ) နဲ့ (က) လွဲရေးနေသလိုဆိုရင် ရည်းစားရရှိပါတယ်။ ပါဆယ်နဲ့ပို့လိုက်တာလို့ ထင်စေနိုင်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လူထုဒေါ်အမာ ကြီးပွါးရေးမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၉၄၀ ဇူလိုင်လ၊ ၁၉၄၀မှာ မြန်မာစာ သတ်ပုံမှန်နဲ့သာရေးသာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အခုစာမှာ မူရင်းသတ်ပုံတွေကို ပြင်ထားတယ်။ မလုပ်ကောင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာစာမှာ ပုလဲပုတီးနှစ်သွယ်ရှိ၏။ တခုက အစစ်။ (တစ်)ခုက အတု။ မြန်မာစာသတ်ပုံအတုက ၁၉၉၁ အကုန်ရောက်မှသာ ဖြစ်လာတာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ချဉ်ဆီ ခမ်းတဲ့ရောဂါက ခြေထောက်တေရောင်တက်လား သိတဲ့သူများပြောကြပါအုန်းပေါင်နဲ့အသဘုံနဲနဲရောင်နေလားလို့ ဆရာဝန်ကို မေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့ကိုမေးရင်တော့ ဆေးစစ်ချက်ပါရောဂါအမည် အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ သိမှသာ ဖြေနိုင်ပါမယ်။ စာရေးတာတော့ ထောက်ပြချင်တယ်။ တေဆိုတာ ပေပေတေတေ၊ တေလေကြမ်းပိုး၊ လူပေလူတေ၊ အင်္ဂတေ၊ တေမိဇာတ်၊ တေဘုမ္မာ။ အသားပုံလို့ ရေးရ။ နဲနဲလည်းရေးနိုင်။ နည်းနည်းက ပိုမှန်တယ်။ (ရောင်တတ်လား)လို့ ရေးရ။ (တက်) ဆိုတာ ဆေးရုံတက်၊ အိမ်ပေါ်တက်၊ သစ်ပင်တက်၊ အတန်းတက်၊ အတက်ရောဂါ။ (တေ) နဲ့ (တတ်) သတ်ပုံတွေမှားရေးနေသူ အတော်များတယ်။ စာမတတ်ဘဲ တနှစ် နှစ်တန်းတက်စနစ်ကြောင့် မြန်မာစာ ရစရာမရှိ ပျက်စီးတော့မယ်။ တရားနဲ့သာ ဖြေကြပေတော့။ တေဘုမ္မာ https://www.youtube.com/watch?v=aB3ptA7ZXk0 ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Miscarriage Prevention ကိုယ်ဝန်မပျက်အောင်
(ကန်တော့) ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ဒါဆို ဒီကလေးလေးလည်း အဖတ်မတင်တော့ပြန်ဘူးပေါ့ နောက်တခါ ယူတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို မဖြစ်အောင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲရှင့် ကိုယ်ဝန်ရတိုင်း ကလေးအကောင်းမမွေးတတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာကို ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် မသိလိုက်သူတွေလဲ မနည်းပါ။ ဘာလို့ အလိုလိုပျက်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကများတယ်။ ကိုယ်ဝန်မှန်သမျှရဲ့ ၁၅% လောက်ပျက်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်အတွင်းမှာ အလိုလိုပျက်ကျတာကို Miscarriage ခေါ်တယ်။ တမင်ဖျက်တာကိုမှ Abortion ခေါ်တယ်။ ၇၅% က ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်အတွင်းမှာ ပျက်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိကို hCG အချင်းဟော်မုန်းစစ်ရတယ်။ အပေါင်းပြရင် ဆေးစာအရ ဓါတုနည်းနဲ့သေချာတဲ့ ကိုယ်ဝန်လို့ခေါ်တယ်။ အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့ စစ်လို့ရလာရင်တော့ အတည်ပြု ကိုယ်ဝန်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ အများစုက ဒီနောက်အဆင့်မှာဖြစ်ကြတယ်။ ပျက်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာ Genetic (Chromosomal) အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒါမျိုးကို ပိုတွေ့ရတယ်။ ၄၂ နှစ်ကျော်ရင် ၂ ဆဖြစ်တယ်။ ၆ဝ%က မျိုးဗီဇချို့ယွင်းလို့ဖြစ်တယ်။ မျိုးဗီဇအခြေခံကြောင့်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်လဲ မတတ်နိုင်ပါ။ သားအိမ်ကချို့ယွင်းတာထဲမှာ မွေးရာပါ သားအိမ်အခန်း ၂ ခုဖြစ်နေတာ၊ သားအိမ် နှစ်ခုတွဲ ဖြစ်နေတာတွေအပ
တစ်နှစ် မဟုတ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တမာရွက်လို့ ရေးရတယ်။ ဘီးစပ်ရွက်လို့ ရေးရ။ ပိစပ်လို့လည်းရေးတယ်။ လောက်သေရွက်က သတ်ပုံတော့ မှန်။ ဆေးနည်း ၁၀၀% မှား။ သို့သော် လူကြိုက်များ။ ဘာရောဂါလာလာ ကိုဗစ်၊ ကင်ဆာ အဲဒီဆေးနည်းတွေပေးနေကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ။ နောက်တခုက ဘာရောဂါလာလာ အောင်မည်းညိုတဲ့။ အောက်မဲညိုလို့ရေးရတယ်။ သတ်ပုံကမှား ဆေးနည်းက မမှန်။ မြန်မာပြည်မှာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Our Language Root မြန်မာစာသည် ခါး၏
မြန်မာဘာသာစကားဟာ သက်တမ်းရှည်ပြီ။ စောစောပိုင်းကာလတွေမှ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေရှိခဲ့လို့ ပင်မမြန်မာစကားထဲမှာ ရောနှောမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပါဠိနဲ့ သက္ကတပါရောနှောလာတယ်။ မြန်မာဘာသာစကားဟာ တိဘက်တိုဘာမင်း အုပ်စုထဲကလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲတာက ဆိုင်နို-တိဘက် ဘာသာစကားမိသားစုထဲကဖြစ်တယ်။ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၁၁ဝဝဝ ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ၁၁ ရာစုထဲမှာရေးသားခဲ့တာကို မှတ်တမ်းကောင်းကောင်း ရရှိထားတယ်။ ပျူဘာသာစကားက ၉ ရာစုကတည်းက ဖြစ်တယ်။ ကနေ့ မြန်မာဘာသာစကားကို ပြောဆို ရေးသားနေသူပေါင်း ၅၂ သန်းလို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းထဲမှာသာမက ပြည်ပ နိုင်ငံတွေမှာလည်း သိသာတဲ့အရေအတွက်ရှိတယ်။ ကိုယ်စာကိုယ် ထိန်းကြရတယ်။ တိုးတက်စည်ပင်အောင် လုပ်ရတယ်။ ပွါးများကျယ်ပြန့်အောင်လည်း ကိုယ်တိုင်သာလုပ်ရပါတယ်။ တမာ ခွေးတောက်၊ မြစ်လျှောက်ရောယှက်၊ တူနှောဖက်က။ သရက်ချိုမြ ဗန္ဓရလျှင်၊ ကွယ်ပအပြီး၊ အခါးသီး၏။ မြန်မာစာမှာလည်း ခါးတဲ့အမြစ်တွယ်နေတာ နှစ်တွေကြာလို့ သတ်ပုံမှန်ကို တင်ပြတာကို အမှန်လို့ မထင်ကြတော့ပါ။ စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၁-၂၀၁၈
သန် သံ သမ် သာန်
၁။ ဆရာ မြန်မာစာ သတ်ပုံအကြောင်း မေးချင်လို့ပါ။ စိတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့တွဲရေးတဲ့ စိတ်သန်ဒန်လို့ အသံထွက်တဲ့ စကားလုံးရဲ့ မူရင်းသတ်ပုံ အမှန်ကို သိချင်လို့ပါခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ၂။ ဆရာရှင့် ကလေးက သုံးနှစ်ခွဲပါ သံကြေဆေးတိုက်ရင်းဖျားနေလို့ ဆက်တိုက်လို့ရပါသလားရှင် သံကြေဆေးက သုံးရက်တိုက်ခိုင်းထားတာပါ တရက်ပဲတိုက်ရပါသေးတယ် ၃။ ဆရာအဲ့ဒါဆို ညဉ့်နက်သန်ကောင်ကအမှန်လား။ သန်းခေါင်ကျော်အချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတွေ့နေရလို့။ ၄။ ဆရာခင်ဗျာ ဝသန်မိုးနဲ့ ဝဿန်မိုး ဘယ်ဟာမှန်ပါသလဲ သန် ကကုသန်ဘုရား၊ ကျွမ်းသန္တာလန်၊ ငသန်ချိတ်ငါး၊ စိတ်သန္တာန်၊ နားသန်သီး၊ ပဋိသန္ဓေ၊ ပိုနသန်ကောင်၊ ရည်သန်၊ လူပြောမသန် လူသန်မပြော။ ဝသန် (မိုး) ရာသီ၊ သံသယ၊ သဏ္ဌာန် (ပုံပန်း၊ လုံးရပ်၊ အသွင်အပြင်)၊ သန်စွမ်း၊ သန်ဘက်ခါ၊ သန်မာ၊ သန်ယံ (သန်ကောင်ယံ)၊ သန်မြန်၊ သန်လျှက်ဓါး (ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်း)၊ သန်လျက်ခုံ (အစိုးရထုတ်သတ်ပုံကျမ်း)၊ သန်လျက်စွန်း၊ သန်လျင်းချိတ် သန်သန်မြန်မြန်၊ သန်ကောင်၊ သန်ချဆေး၊ သန္ဓေကောင်း၊ သန္နိဋ္ဌာန်၊ သန္နိပတ်၊ သန္နိပါတ်နာ၊ သန္တာန် (အစဉ်အဆက်)၊ သန္တာကျောက်တန်း၊ သံ ကလန်သံပျင်၊ သံချွန်၊ သံခိပ် (အကျဉ်း)၊ သံချပ်အကျႌ၊ သံချိတ်၊ သံချိုသီချ
မြတ်စွာဘုရား ခြေတော်လက်တော်နွေးစေဖို့ သနပ်ခါးမီးပူဇော်တဲ့ ကုသိုလ်ပြုမှုကို ပြည်တွင်းမှာနေစဉ်ကတော့ တပို့တွဲလပြည့်ညမှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြင်မှာတော့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးမှာ ဘာလုပ်လုပ် စတိသာလုပ်နိုင်တယ်။ သနပ်ခါးတုံးလေးတွေကို ရှိတဲ့ဒါးနဲ့စိတ်ခွဲရတဲ့အလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ရတာ။ မတော်လို့ ဘယ်ဘက်လက်ညှိုး တချက်ထိသွားလို့ ပလာစတာကပ်ထားရသေးတယ်။ ဘုရားစင်ရှိတဲ့အခန်းမှာလည်း မီးခိုးနဲ့ မီးတောက်ကို ဒေါ်မြမြအေးက ရေခွက်နဲ့ ရပ်စောင့်သင့်ရတယ်။ မြန်မာပြည်ကဘုရားတွေမှာ သနပ်ခါးမီးသင်းတဲ့ အနံ့တွေ မွှေးကြိုင်ပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၁-၂၀၁၈
မော်စီတုန်းထက် တရုပ်စစ်တာတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဒီစာအုပ်ကို တရုပ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံမှာ ရိုက်တယ်လို့ သိသွားရင် မြန်မာစာအဖွဲ့က လိုက်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။ တရုတ်ကနေ တရုပ်၊ သမ္မတကနေ သမတလို့ အမှန်ကို ပြန်ပြောင်းလိမ့်မယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ရေးထားပြီးသမျှစာတွေထဲကနေ တရုပ်စာလုံးတွေလိုက်ရွေးရင် အတော်ကိုများတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေ။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ တရုပ်သွေးပါသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆေးကျောင်းမှာဆိုရင် ခုံနံပါတ်ချင်းကပ်ရက်က တယောက်။ နယူးဒေလီမှာ ယမုန်နာဆေးခန်းဖွင့်တော့ အလှူငွေလှမ်းပို့သူတယောက်ကလည်း မြန်မာပြည်သား ယူအက်စ်အေမှာနေထိုင်သူ တရုပ်။ ကျေးဇူး။ သူ့အရင် စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ မြန်မာ-ရှမ်း-တရုပ်အမျိုးသမီးကြီးက လှူတယ်။ ကျေးဇူး။ ဆေးခန်းကို လှူသူတွေထဲမှာ မြန်မာပြည်ကနေ ဒေလီမှာ စီးပွားရေးလာလုပ်နေသူ တရုပ်တဦးလည်းပါတယ်။ ကျေးဇူး။ နယူးဒေလီမှာဘဲ တရုပ်သံအရာရှိတယောက်က နှစ်သစ်ကူးပြက္ခဒိန်လာပေးတယ်။ ကျွန်တော့ရုံးခန်းမှာ ချိတ်ထားတယ်။ တိဘက်ကလည်းပေးလို့ ယှဉ်ပြီးချိတ်ထားတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မြန်မာပြည်အလည်ပြန်တော့ လေဆိပ်ထိ လာကြိုသူတွေထဲမှာ ဖရင်းတယောက်က တရုပ်။ စားစရာတွေ မကြာခဏ လှမ်းပို့သေးတယ်။ ကျေးဇူး။ ကျေးဇူး။ မုံရွာမှာ ညစာကျွေးသူတွေထဲမှာလည်း တယောက်က တရုပ်။ ကျွန်တော်က ၁၉၆၇ တရုပ်အရေးအခင်းမှာ ထိန်းသိမ်းခံရဘူးတယ်။ မွေးဇာတိရွာမှာတော့ တရုပ်နဲ့မှား အဖမ်းခံရတာတဲ့။ ကျွန်တော်အညာသားက အသားနည်းနည်းလတ်တယ်။ ဒီရောက်တော့လည်း ဒေသခံလူမျိုးတွေက တရုပ်လား အမေးခံရတတ်တယ်။ အဲလိုဘဲ မိတ်ဆ
Stiff neck remedies လည်ပင်းခိုင်နေခြင်း
ဆရာရှင့် အမျိုးသား အသက် ၄၂ နှစ် ဇက်ကခိုင်နေပြီး လှည့်မရပဲနာနေလို့ပါ ဆေးခန်းဝေးတဲ့နေရာရောက်နေလို့ပါ ဆေးလေးညွှန်ပေးပါရှင့် - နာတဲ့နေရာကို အပူဖြစ်စေ အအေးဖြစ်စေ ကပ်ပေးပါ။ - ပဌမ ၄၈ ကနေ ၇၂ နာရီအတွင်း အအေးကပ်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အပူကပ်ပါ။ - ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖင်) သို့မဟုတ် acetaminophen (ပါရာစီတမော) တနေ့ ၁-၂ ၃ ကြိမ် သောက်ပါ။ - လှုပ်ရှားလို့ရသလောက် လှုပ်ရှားပါ။ - အသာအယာ နှိပ်နယ်ပါ။ - ခေါင်းအုံးနဲ့ မွေ့ရာ (အိပ်ရာခင်း) အနေတော်ပါစေ။ - soft neck collar လည်ပင်းသုံး (ကော်လာ) ထပ်ထားပါ။ 42 ကို ၄၂ လို့ ပြင်လိုက်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာ အင်ဒီးယားမှာ ပြောင်းကို ဘယ်လိုစားကြပါသလဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က မေးတာ။ အင်းဒီယားမှာတော့ မြန်မာပြည်ကလို စားကြပါတယ်။ အခုရောက်နေတဲ့ ယူအက်စ်အေ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်မှာစားကြတာကို ရေးပါမယ်။ • ဆရာမေးတာကို ကျွန်တော့်ဆရာကတော်ကိုမေးပြီး ရေးပါရစေ။ • ပြောင်းမှုံ့ကို ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့အစာတွေလုပ်သလို သုံးပါတယ်။ ရိုတီး (အိုးကင်းပူတိုက်)၊ ပူရီ (ဆီနည်းနည်းနဲ့ကျော်)၊ ပလာတာ (ပရာထာ)။ • ပြောင်းမှုံ့ + ဂျုံမှုံ့ + ဆန်မှုံ့ + ဘာလီမှုံ့ + ဆတ်မှုံ့ ဆတူရောပြီး ‘ပရက်ရှာကွတ်ကာ’ ထဲမှာ ပြုတ်တယ်။ အမှန်က အမှုံမဖြစ်သေးတဲ့အရွယ်အစား၊ ‘ဂရင်ညူးလ်’ အဆင့်ဖြစ်တယ်။ အသီးတမျိုးမျိုး၊ အစေ့အဆံတမျိုးမျိုးနဲ့ ရောစားကြတယ်။ • ‘ကွန်းဖလိပ်’ ပြောင်းမှုံ့ကိုတော့ မနက်စာအဖြစ် နွားနို့နဲ့ရောပြီးစားသောက်တယ်။ အဲတာကတော့ အနောက်နိုင်ငံတိုင်းမှာ ‘ဘရိတ်ဖတ်စ်’ ဖြစ်တယ်။ ဟော်တယ်တိုင်းမှာလဲ အဲတာရတယ်။ ပုံစံ၊ အရောင်အသွေး၊ အရွယ်မျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်။ • ကလေးတွေအတွက်ဖြည့်စွက်စာကိုလဲ Rice cereal, Oatmeal cereal, Barley cereal အမှုံ့စုံနဲ့လုပ်တယ်။ • ပြောင်းဖူးမှာတော့ ထွက်တဲ့နယ်အလိုက် ကောင်းတာနဲ့ ပိုကောင်တာမတူကြပါ။ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ကနေ မှာရတယ်။ ‘မီဇိုရမ်’ ကလာတဲ့ပြောင်းဖူး
မိဘပေးစား ဒီလူကြီး ဇနီးရပါစေ
အမေး = Cancer သမားက အသားနီနီတွေမစားရဘူး ဥပမာ အမဲသား လိုမျိုးအသားပေါ့ Fb မှာတွေ့မိလို့ အဲ့ဒါဟုတ်လားရှင် အဖြေ = စားရပါတယ် တပါတ် ၂ကြိမ် ကျမအမျိုးသားကိုပေးစားတယ်။ ‌သွေးအားပြည့်အောင်။ မိမိဆရာဝန်ကိုမေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကျွန်တော့်ကို မေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ကင်ဆာနဲ့ အစားအသောက်ကြောင်း မကြာခဏ တင်ပြထားပြီးပါပြီ။ အမေးမခံရသူက ဝင်ပါချင်လာတယ်။ ဖြေတဲ့သူ တပါတ် ရေးတာ မှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ဒါပေမဲ့ ကျမအမျိုးသားကို စားခိုင်းတယ်၊ စားစေတယ်လို့ ရေးရမယ်။ ကျမအမျိုးသားကိုပေးစားတယ်လို့ ရေးတာက အဓိပ္ပါယ်တလွဲရောက်စေတယ်။ မိဘတွေက သားသမီး အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ မိန်းမပေးစား၊ ယောက်ျားပေးစားတယ်လို့ အစဉ်အလာရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုစေတာ။ ယိုးဒယားပြန် အမာစိန်သီဆိုတဲ့သီချင်းတပုဒ်မှာ မိဘပေးစား ဒီလူကြီး ဇနီးရပါစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
နီစွေးစွေးကို နီဆွေးဆွေးလို့ ရေးတာ မှားတယ်။ တသိန့်နှစ်သောင်းသည် တစ်သိန့်နှစ်သောင်း မဟုတ်။ ထပ်လောင်းတဖန်သည် ထပ်လောင်းတစ်ဖန် မဟုတ်။ မင်းစစ်တကာသည် မင်းစစ်တစ်ကာ မဟုတ်။ လျှပ်သွင်တည့်ရောင်ပြေး နီစွေးစွေးသည် နီဆွေးဆွေး မဟုတ်။ (ငစဉ့်ကူးမင်း ရွှေနားတော်သွင်း ပလိပ်စားဧချင်း) ပုံအတွက် ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
PPE Recommendations ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ခေါင်းဖုံးစရာ
မြန်မာပြည်ကပုံတွေထဲမှာ အတော်မျာများက ခေါင်းကိုပါ ဖုံးအုပ်ထားကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဆေးရုံနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက အပြည့်အစုံလိုအပ်ပေမဲ့ လူတိုင်းက အကုန် မလိုအပ်ပါ။ အစားအသောက်ချက်ပြုသူတွေခေါင်းဆောင်းတာက တမျိုး။ စျေးရောင်းသူတွေ စျေးသွားသူတွေက အဲလောက်ထိ မလိုအပ်ကြပါ။ လိုတာက နှာခေါင်းစည်းနဲ့ လက်ကို မကြာခဏဆေးခြင်း။ - Bouffant Caps ခေါင်းဆောင်းစရာ = မလိုအပ်ပါ။ - Headband with buttons worn with face mask = သုံးနိုင်။ - Surgical caps = ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ခေါင်းစွပ် မလိုအပ်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အာတလွတ်ဥ၊ မျောက်ဥ၊ ဝဥ၊ ကျွေးဥ၊ ပလောပီနံဥ၊ ကစွန်းဥနဲ့ တာဒိုဥတွေလိုပဲ (စတာ့ချ်) ခေါ် ကော်မှုန့်ဓါတ်ပါတယ်။ 3.5 ounces (100 grams) တခွက်မှာ ဒီအာဟာရဓါတ်တွေရမယ်။ Calories: 191 Protein: 1.5 grams Fat:3grams Carbs: 40 grams Fiber:2grams Vitamin C: 20% of the Daily Value (DV) Copper: 12% of the DV Thiamine: 7% of the DV Folate: 6% of the DV Vitamin B6: 6% of the DV Potassium: 6% of the DV Magnesium: 5% of the DV Niacin: 5% of the DV ဖတ်ပြီးမှ စားတာတော့မဟုတ်။ စားနေရင်း ဖတ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စောစောက ရေဒီယိုတခုက မေးစရာတခုမေးလို့ ဖြေပါတယ်။ ရုပ် + အသံ။ အရွယ်ကောင်းစဉ်ကပုံမျိုးနဲ့ တွဲတင်တာထက် သဘောကျတယ်။ အမေးအဖြေပြီးတော့ ဆရာ(ကြီး) သတ်ပုံတွေရေးတာလည်း သဘောကျတယ်တဲ့။ ကျေးဇူး။ အဲဒီရေဒီယို ဝက်ဆိုက်က မြန်မာစာ မှန်တာများတယ်။ အကုန်တော့ မမှန်ပါ။ အမှန် အမှား ဘယ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါသလဲ။ - တပည့်မကောင်း ဆရာ့ခေါင်း - သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း။ - သတ်ပုံမကောင်း (မြန်မာစာအဖွဲ့ခေါင်း + စာရိုက်သူတွေခေါင်း + စာဖတ်သူတွေခေါင်း + စာအုပ်ပြန်ထုတ်သူတွေခေါင်း + သတ်ပုံမှားစာအုပ်တွေ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေခေါင်း + ကျွန်တော့ခေါင်း။) ငယ်ငယ်က ကလေးတွေကစားကြတယ်။ မကောင်းသူ့ထိပ် ကောင်းသူ့ထိပ်၊ ကျချင်သူ့ခေါင်းပေါ်ကျရော တခုခုကို အပေါ်မြှောက်ပစ်ကြတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ခုတခါ မှန်၏။ အရင်တခါလည်း မှန်၏။ နောက်တခါလည်း မှန်ပါဦးမည်။ မူရင်းရေးသားသူ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စန္ဒယားချစ်ဆွေ တင်တင်မြ ဖြိုးဖြောက်ဖြောက် တပေါက်ပေါက်ကျဆင်း မေ့့စိတ်က ထင်တနိုးနိုး မသိနိုင်ပေ မေ့တကိုယ်ရည် သည်ဆောင်းမှာ တကိုယ်ရည်သာပေ ပျိုမေစိတ်ရူးပွေ တကိုယ်ရည် စိတ်ကူးနေ https://www.facebook.com/100028291700631/videos/397554805460473 မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်ခေတ်က သီချင်းတွေလည်းကောင်း ရာသီတွေလည်း မှန်ခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Single Effort တယောက်အား
ရေးထာတာ ၈ နှစ်ပြည့်ပြီ။ • ငါတတ်တဲ့ ဆေးပညာ၊ သလေးစပါးလောက်သာ ရှိပါတကား။ • ငါသင်ထားတဲ့ အသိပညာ၊ နှမ်းစိပမာသာ ရှိပါတကား။ • ငါလုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ရွေးစေ့ထက်တောင် သေးပါတကား။ • ဆန်စေ့ကို ထမင်းချက်၊ • ဆီထွက်အောင် နှမ်းကိုကြိတ်၊ • ငါ့ဝိတ်ကို ရွေးစေ့နဲ့ချိန်ကြည့်၊ • အတိအကျ ရတဲ့အဖြေ၊ • ဘာဖြစ်နေနေ ငါတွေးနေတာက ဆန်ကုန်မြေလေး မဖြစ်ရေးဘဲ။ ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
နောက်ထုတ်စာအုပ်မှာ အဖုံးမှာကိုက စာလုံးပေါင်း မှားနေတယ်ဆရာ။ - ပန်းပန်လျက်ပါ မှန်၏ - ပန်းပန်လျက်ဘဲ မှန်၏။ - ပန်းပန်လျက်ပဲ မှား၏။ - ပန်ပန်လျှက်ပါ မှား၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကိုဖိုးခိုင် နှင့် မတူးခိုင်သို့
4ခိုင်ပွင့်တဲ့အပင် 2ခိုင်ပွင့်တဲ့အပင်တွေနဲ့ မွှေးကြိုင်နေပါပြီ ဖတ်ရင် ဒီလိုဖတ်ရမယ်။ ဖိုးခိုင်ပွင့်တဲ့အပင်၊ တူးခိုင်ပွင့်တဲ့အပင်။ စောစောကပဲ သူငယ်ချင်းတယောက်က နမူနာတခု ပို့သေးတာ။ ဖိုးခွဲ ဖိုက်နာရီ။ စမတ်ဖုန်းကိုင်သူတွေ ကီးဘုတ်မှာ ၁-၂-၃-၄ မပါကြလို့ထင်တယ်။ ကောင်းတဲ့ဖုန်းသာ ကိုင်ကြစေချင်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တခြားသူတဦးက အပြာရောင်မျဉ်းသားပြီး အမှားကို ထောက်ပြတားတာ။ ကျေးဇူး။ ကျွန်တော်က နောက်ထပ်မျဉ်းအနီရောင် ထပ်တိုးဦးမယ်။ ခုခေတ်မှာ တစ်ကြလွန်းလို့ တစ်ကသိုလ်လို့ ရေးရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကနေယူတာအတွက် အဆင့်မပါလည်း ရပါတယ်။ တက်စီ၊ တက်ဆီ။ ပါဠိစာလုံး မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ